Dadka loogu talogalay Sumcada Baaskiilka E-Bike 2019: Sharciyada, Helitaanka eMTB, Daraasadda eBiking, Dhiirrigelinta, iyo inbadan!
Sannad-sannadeedka 5-aad ee Dadka Loogu talagalay Baaskiilada E-Bike wuxuu ahaa guul weyn iyadoo kaqeybgalka ugu weyni uu weli yahay.
2019 waxay ahayd sanad mashquul ah dhinacyo badan oo ka mid ah baaskiiladaha korontada ku shaqeeya sidaa darteed waxaa jiray waxyaabo badan oo dabooli kara dhacdadan 1 maalin.
Sannadkan shirweynaha waxaa lagu qabtay xarunta Canyon Bicycles USA ee ku taal Carlsbad, California.
Ku raaxayso warbixintan Summitaanka E-Bike!
Morgan Lommele (bidix) iyo Larry Pizzi (midig) oo ka socda Dadka loogu talagalay Baaskiil
Morgan Lommele, Agaasimaha Gobolka & Siyaasadda Maxalliga ah ee Dadka loo yaqaan Baaskiillada ayaa lagu soo bandhigay guushii ugu dambeysay ee sharciga e-baaskiilka.
Ansixinta sharciga 3 Class eBike ee sharciga ah ayaa labanlaabay tirada gobolada sanadka 2019.
5 sano oo shaqo ah kadib 23 gobol ayaa qaatay sharciga biilka elektaroonigga ah oo 57% ay kujiraan dadka Mareykanka ah.
Markay tahay 2020, Dadka loogu talagalay Baaskiilada waxay leeyihiin hadaf ah in lagu daro 14 gobol oo dheeri ah 23-ka hadda jira.
Gobolladaas waa: Alabama, Alaska, Florida, Kentucky, Iowa, Louisiana, Minnesota, Missouri, Montana, North Carolina, Oregon, South Carolina, West Virginia, iyo Virginia.
Dadka loogu talogalay Baaskiilku waxay xusayaan in gobolku leeyahay sharciga 3-e een ee sharciga eBike ah ay arkeen iibinta eBikes in ka badan laba jibaar ah maxaa yeelay waxay ka caawineysaa ganacsatada inay si cad u sharaxaan halka eBees-ka lagu dhejin karo iyo lama taaban karo.
2019 sidoo kale waxay ahayd sanad weyn oo loogu talagalay nafaqeeyayaalka yar yar oo leh 'eScooters' oo helaya feejignaan badan.
Baabuurleyda eScooter-ka iyo shirkadaha waxay rabaan meelo aamin ah oo lagu raaco waxaana jira iskaashi ka dhexeeya baaskiiladaha, eBikoorada, eScooters-ka, lugeeyayaasha, iwm marka ay timaado u doodidda kaabayaal badan oo aamin ah.
Dadka loogu talagalay Baaskiillada waxay la shaqeeyaan shirkadaha isgaarsiinta ee 'eScooter' kaabayaasha wanaagsan iyadoo ay sidoo kale ku talinayaan '' mootada mootada waa inay ku maareeyaan go'aamiyeyaasha maxalliga ah mudnaantooda, kana duwan yihiin baaskiiladaha '.
Guul kale oo weyn sannadka 2019 ayaa ahayd ansixinta eBikooyinka Beerta Nasashada Qaranka iyo BLM dhul si ay u galaan halka baaskiil dhaqameedyada lagu fuuli karo.
Maamulayaasha dhulka maxalliga ah ayaa go'aan ka gaari doona nooca eBikiska loo oggol yahay dariiqyada baaskiillada dhaqameed. Dadka loogu talagalay Baaskiilku waxay kugula talinayaan la xiriirista maareeyayaasha dhulka ee maxalliga ah danta aad ka leedahay helitaanka baaskiilka korantada oo laga yaabo inay la kulanto iyaga si ay u muujiyaan waxa eBikku yahay.
2019 ayaa sidoo kale arkay Sharciga Golaha Senateka ee California ee 400 kaas oo hadda ku jira eBikes sidii ikhtiyaar iibsiga loogu talagalay Gawaarida Nadiifka ah ee Kaalifoorniya 4 Dhammaan barnaamijyada: 'Nadiifinta Gawaarida 4 Dhammaan waa barnaamij diiradda saaraya bixinta dhiirrigelin iyada oo loo marayo Maalgashiga Cimilada ee California si darawalada dakhligoodu hooseeyo ee California ay u daraan da' weyn, baabuurka aadka u wasakhaysan kuna beddela eber eber-em የቅርብ beddelaya '.
Waxaan arki karnaa gobolada kale ee bixiya dhiirrigelinta iibsiga eBike sidoo kale. Feejignow
In la hubiyo in baaskiillada korontadu ay ahayd caqabad la soo saaray maxaa yeelay maahan bixiyeyaasha caymiska oo dhan in ay daboolaan eBikiska.
Qaar ka mid ah xubnaha warshadaha ayaa ka shaqeynaya inay bartaan aqoonsiyaasha shahaadada qorayaasha ee ku saabsan baaskiilka korantada.
Fikrad ka timid kaqeybgaleyaasha qaarkood waxay ahayd in Dadka loogu talagalay Baaskiiladaha ay suuragal tahay inay bixiyaan caymis. Velovidence waxay bixisaa caymiska baaskiilka korantada.
Alex Logemann, Golaha Siyaasada ee Dadka loogu talagalay Baasuukeyaasha, ayaa soo bandhigay taariikhda, xaaladda hadda jirta, iyo mustaqbalka suurtagalnimada ee lacagaha looga soo xaroodo Shiinaha, Yurub, iyo Japan.
Marka laga hadlayo lacagta shiinaha, waxaa jiray faahfaahinta wanaagsan ee warshadaha laakiin guud ahaan waxbadan isma bedelin ilaa 3-dii Diseembar markii la soo bandhigay.
Waxaa jiray suurta gal ah in canshuurta laga qaado qaar ka mid ah qaybaha baaskiillada ee ka imanaya Yurub sababtuna ay tahay kaalmada dhaqaale ee Midowga Yurub ay siiso Airbus laakiin aakhirkii qaybo ka mid ah baaskiilku wuu ka reebay wixii canshuur ah.
Japan iyo Mareykanka waxay gaareen heshiis ganacsi oo cusub bishii Oktoobar kaas oo yareyn doona lacagaha canshuuraha ee laga qaado qeybaha baaskiillada in ka badan 2 sano.
Kordhinta Kanaalka E-Bike ee hal-abuurka iyo Wacyigelinta
Karen Wiener, La-lahaanshaha dukaamada New Wheel eBike ee ku yaal aagga San Francisco, ayaa soo bandhigtay fikradeeda ku saabsan sida warshadaha guud ahaan uga wada shaqeyn karaan kobcinta suuqa baaskiilka korantada ee Mareykanka.
Waxay hoosta ka xariiqday in ganacsatada maxalliga ah ay leeyihiin macluumaad aad u qiimo badan oo loogu talagalay shirkadaha eBike ee ku saabsan kuwa raaca eBike-ka ee ay u adeegaan.
Karen waxay si buuxda ula wadataa bushkuleetiga xamuulka korantada iyadoo qaadaysa gabadheeda yar Ida. Waxay wax badan ka baratay safarka maalinlaha ah waxayna ku dhiirigelisaa dhammaan kuwa ku hawlan warshadaha inay adeegsadaan eBikesyada sida ugu suurta galka ah si ay runti ugu noolaadaan khibradda eBike.
The New Wheel waxay diiradda saareysaa baaskiilada korantada sida bedelka baabuurta waxayna ku shaqeeyaan u doodista maxalliga ah ee kaabayaasha badan ee baaskiilka ee aagga San Francisco.
eMTB wuxuu sii wadaa inuu noqdo qeybta kobcinta eBike oo hada waxaa jira 23 dowladood oo u ogolaanaya eMTB wadooyinka qaar ee aan laheyn wadada.
Gobolladaasi waa: Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Utah, Virginia , Wayoow.
Dadka loogu talo galay Baaskiilku waxay leeyihiin khariidad eMTB oo ay la socdaan tusahan si ay u raacaan safarrada safarka. Waxay sidoo kale abuureen Tilmaamaha eMTB Trail Etiquette iyo eMTB Playbook ee u doodaya helitaanka eMTB ka wanaagsan.
Qaar ka mid ah shaqada muhiimka ah waa in la helo maareeyayaasha dhulka ee maxalliga ah si ay ula sii bartaan eMTBs. Dadka loogu talogalay Baaskiilku waxay ku talinayaan la kulanka maareeyaha dhulalka si ay u fahmaan awooda eMTB ee go'aaminta halka loo oggol yahay.
Joe Vadeboncoeur waa maamule hore Trek iminkana lataliye warshadaha baaskiilka oo u dooda. Wuxuu rumeysan yahay in daraasado dheeri ah loo baahan yahay in lagu sameeyo saamaynta eMTB si looga sii caawiyo maamulayaasha dhulka inay go'aan ka gaaraan marin-u-helka.
Qaar ka mid ah daraasadaha iyo su'aalaha u baahan in laga hadlo Mr. Vadeboncoeur waa:
Studies Daraasado fara badan oo muuqaal jidheed taabasho eMTB ah oo ka socda qaybo kala duwan oo dalka ah iyo noocyo ciid ah oo kala duwan
E Miyay eMTBs iyo MTBs dhaqameed ku wada noolaan karaan dhammaan noocyada raadku? Miyay raadadka qaar u baahan yihiin in la beddelo?
Wadooyinka qaarkood waxa laga sameeyay maalgelin loogu talagalay dariiqyada aan la wadin. Sidee ayay u oggolaaneysaa eMTBs inay shaqeyso?
Limit Xadka korantada iyo xawaaraha caawinta ugu badan waa in la dhisaa.
An Kordhinta rakaabka wadada tareenka ma waxay u horseedaa dayactir badan? Hadday haa tahay, xaggee bay maalintu ka iman doontaa? Canshuuraha iibka ama lacagta laysanka?
Soo-bandhigidda ka dib Mr. Vadeboncoeur wuxuu lahaa koox maareyn dhul ah, IMBA rep, iyo San Diego Mountain Bike Association oo ka jawaabaya su'aalaha dhagaystayaasha kuna saabsan mowduucyo badan oo uu soo bandhigay.
eBike Data iyo Stats
Kooxda NPD waxay soo bandhigeen Retail Trends iyo E-Bike Sales gudaha Mareykanka waana war wanaagsan in marka loo eego xogtooda xogta baaskiillada korantada ay sare u kacday 51% sanadkii la soo dhaafay.
eBikes sidoo kale waa muuqaal weyn marka la barbar dhigo qeybaha kale ee badan ee guud ahaan warshadaha baaskiilka.
Dhaqdhaqaaqa Daraasadda E-Bike
John MacArthur oo ka socda OTREC & PSU
John MacArthur waa Maareeyaha Barnaamijka Gaadiidka Joogtada ah ee TREC - Portland State University wuxuuna ahaa shirkii ugu dambeeyay ee lagu horumarinayo daraasadda elektaroonigga ah.
Baaskiilada korantada (e-baaskiillada) waa qaab gaadiid cusub oo si aada u wanaajin kara waxqabadka nidaamka gaadiidka haddii loo qaato bedel baabuurta. Baarayaasha jaamacadda Tennessee, Knoxville, Portland State University, Jaamacadda Pittsburgh, iyo Bosch E-Bike Systems waxay maalgalin ka heleen Mu'asasada Sayniska Qaranka si loo cabiro hab-dhaqanka socdaalka ee dhabta ah iyo qiimeynta saameynta joogtada ah ee xulashooyinkaas. Waxaan horumarinaynaa aalad si sahlan loo daad gureeyo, oo aan la isugu yeerin, iyo kaabayaal kombiyuutar oo awood u leh tikniyoolajiyadda teknoolojiyadda elektaroonigga ah iyo awoodda aaladaha taleefanka gacanta. '
Dheeraad ah 'Ficillada hadda socda ee raadraaca macluumaadka elektaroonigga ah ee' e-baaskiilku 'waxay kuxiran yihiin xusuusta iyo is-sheegitaanka ee isticmaaleha. Qaabkeenna ayaa beddelkeeda isticmaali doona casriga casriga ah si uu u sameeyo xog-ururinta safarka ah ee loo yaqaan 'ad-hoc-safarka' si loogu kabo xog aruurinta dadban iyo, iyadoo la adeegsanayo algorithms-ka barashada mashiinka, loo abuuro xog-haynta ugu weyn uguna taajirsan si loo taageero koritaanka isticmaalka elektaroonigga sida xulashada gaadiidka. '
Waxay si firfircoon u raadinayaan kaqeybgalayaasha 'waa inay isticmaalaan e-baay-gaaga si ay u raacaan, u socodsiiyaan, ama u booqdaan saaxiibbada iyo qoyska' oo ay leeyihiin aaladda korantada ee loo yaqaan 'Bosch' eBike oo leh ugu yaraan iPhone 10.
Canyon waxay lahayd laba bushimood oo koronto ku shaqeeya oo leh qiime Yurub ah oo ay ku qoran tahay qoraalka "Waqtigan laguma heli karo Maraykanka"… ..
Kani waa nooca loo yaqaan 'Canyon Spectral': 8.0 oo laaliyeyn buuxda la leeyahay wadista dhexe ee Shimano.
Nidaamka wadista dhexe ee Shimano E8000 waxaa loo isticmaalaa jumlad isku-dhafan oo isku dhafan.
Wadada loo yaqaan 'Canyon Roadlite': 9.0 waa naqshad qurxoon oo loo yaqaan 'eBike style' oo leh taayirrada waxyar oo ka baxsan wadada.
Waxay kudhisan tahay nidaamka wadida dhexe ee Fazua oo leh qeybta wadista si buuxda looga saari karo oo ay kujirto baytariga iyo matoorka.
La soco wixii warar dheeri ah ee elektaroonigga ah iyo dib u eegisyo ah iyo mahadsanid aqriska!
Waqtiga boostada: Jan-09-2020